Zenmate ပရီမီယံ Crack - အပြည့်အဝ Pro ကိုကို Hack Code ကို v3.1 အခမဲ့ဒေါင်းလုပ် - Softkelo - Unlimited ဆော့ဖ်ဝဲများရှာပါ, ဒါကိုတော့ & hack
နေအိမ် » ပရီမီယံ Cracked » Zenmate ပရီမီယံ Crack – အပြည့်အဝ Pro ကိုကို Hack Code ကို v3.1 အခမဲ့ဒေါင်းလုပ်
Zenmate ပရီမီယံ Crack – အပြည့်အဝ Pro ကိုကို Hack Code ကို v3.1 အခမဲ့ဒေါင်းလုပ်
အားဖြင့် softkelo | စက်တင်ဘာလ 14, 2017
Zenmate ပရီမီယံ Crack တစ်ကမ္ဘာလုံးအားလုံးအတွက်အလွန်အစွမ်းထက်နှင့်ကျော်ကြားသောဆော့ဝဲဖြစ်ပါသည်. ဒီဆော့ဗ်ဝဲကသင်၏အားလုံး IP လိပ်စာနှင့်သင့်ပုဂ္ဂလိကဝိသေသလက္ခဏာဖျောက်ရန်ကူညီပေးသည်. ဒီဆော့ဗ်ဝဲလည်းသင်သုံးနိုငျသင့်ရဲ့တိုင်းပြည်အတွက်ပိတ်ပင်ထား site တစ်ခု browse နိုင်မဟုတျပါကသင်၏ country.If ပိတ်ဆို့ထားသောကြောင့်ဘ်ဆိုဒ်ကိုပိတ်ဆို့ဖို့ကူညီပေးသည် Zenmate ပရီမီယံ Code ကို နှင့်သင်သည်မည်သည့် site ကိုဖွင့်နိုင်သည်.
အဆိုပါ Zenmate ပရီမီယံကုဒ် အဆင့်မြင့်ထောက်ပံ့, အင်တာနက်ဘရောက်ဇာအဖြစ်မိုဘိုင်းများအတွက်ပုဂ္ဂလိကနှင့်ဖြေလျော့ပေးခြင်း tunneling ပံ့ပိုးပေး.Zenmate Crack Zen-ကိုယ်ရံတော် GmbH ၏အကူအညီနှင့်အတူအုပ်ချုပ်နေသည်, ဘာလင်လုံးဝကိုအခြေခံပြီးတစ်ဦးက start-up, အဖှဲ့အစညျး. အဆိုပါလုပ်ငန်းယခုနှစ်စတင်-Up ရရှိခဲ့ 2014 Germany.You အတွက်ဆုချီးမြှင့်ကိုလည်းနိုင် Zenmate ပရီမီယံလို့ Torrent ရေစီးခြင်းကနေ download ပြုလုပ်.
Zenmate ပရီမီယံ သင်သည်သင်၏တိုင်းပြည်တစ်ပိတ်ပင်တားဆီးမှုများမှာသောဝက်ဘ်ဆိုဒ်များဖွင့်လှစ်ကူညီပေးသည်သော proxy server တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်.Zenmate ပရီမီယံ Gratis ထို့အပြင် traffic.You လုပ်နိုင်သင်၏ဝဘ် secure ရန်သင့်အားကူညီပေးနေတာဖြစ်ပါတယ် download, Zenmate ပရီမီယံအခမဲ့.
Zenmate ပရီမီယံ Crack Download
Zenmate ပရီမီယံ Crack
အပြည့်အဝ Zenmate တစ်ဦးဒေါင်းလုဒ်လုပ်လို့ plug-in ကိုအင်တာနက် browser များအဘို့အပင်ကဏ္ဍတွင်ကြီးမားသော net.Download browsing ကဲ့သို့သော user ထောင်ပေါင်းများစွာ၏ထောင်ပေါင်းများစွာ၏ပုဂ္ဂလိကကာကှယျနှင့်ကာကှယျဖို့ဒီဇိုင်းသို့လှည့်အရာဖြစ်ပါသည် Zenmate ပရီမီယံ Code ကို v3.1 လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်ပါသည်.
လုံခြုံမှု plug-in ကို IPsec ၏ protocol ကိုအသုံးချဖို့တစ်ဦးဖြေလျော့ပေးခြင်းများနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံ VPN ကိုဥမင်လိုဏ်ခေါင်းကမ်းလှမ်းခြင်းနှင့်ဖန်တီးသောလွယ်ကူသော app ကိုတဆင့်လည်းမိုဘိုင်းထုတ်ကုန်မှနေရာလေးကိုဖြစ်ပါသည်. လက်ရှိတွင်ဆွစ်ဇာလန်နှင့်အတူအဓိကလူအမျိုးမျိုးကိုဖြတ်ပြီးမတူကွဲပြားဆာဗာများအတွက်တည်ခင်းဧည်ဒါဟာမိုင်, ဂျာမနီ, ဟောင်ကောင်, ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း, နှင့် USA.You Download နိုင်သလား Zenmate ပရီမီယံခြောငျး.
သငျသညျဒါ့အပြင်လိုနိုင်ပါစေ: အားလုံး Ip Crack Hide - အခမဲ့ဒေါင်းလုပ်အပြည့်အဝ Activation Key ကို + serial Keygen
နောက်ဆက်တွဲ Zen အိမ်ထောင်ဖက်ထိပ်ဆုံးလူတန်းစား၏မူလတန်းနှင့်အမှတ်ရစရာလုပ်ဆောင်ချက်များကိုနှင့်စွမ်းရည်၏နံပါတ်ရှိပါသည်:
အဆိုပါ plug-in ကိုအထူးလုံးဝတူသောစိတ်သုံးခုကျောင်းအုပ်ကြီးအင်တာနက် browser များနှင့်အတူရှိ,
Mozilla Firefox ကို, Google Chrome နှင့်အော်ပရာ. ဒါဟာအစတစ် COMODO နဂါးများကဲ့သို့ကွဲပြားခြားနားသောကွန်ပျူတာ device ကို browser များကူညီပေးသည်, ခရိုမီယမ်, နှင့်စတုရန်းသံ.
ဒါဟာ Android နှင့် iOS app များကိုနှစ်ဦးစလုံးအတွက်လာ, ပုံမှန် VPN ကိုချိတ်ဆက်မှုဖန်တီးပေးသော IPsec အားဖြင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရာ.
လည်းအားလုံးကြည့်ရှုခြင်းလုပ်ငန်းများနှင့်အသွားအလာကာကှယျနှင့်စာဝှက်ပေးနိုင်တဲ့အသားတင် browser များအဘို့ Zen အိမ်ထောင်ဖက်တစ်ဦး proxy ကို plug-in ကိုသောစကားလုံးယူပါ. ဒါဟာအမြဲတမ်း VPN service တစ်ခုအရိုးရှင်းဆုံးအဖြစ်အမှုထမ်းစေခံရဖို့မဟုတ်ပါ.
အောက်ပါ, အကျဉ်း, ဘယ်လိုအပ်လုဒ်ကို-on ကိုကျင့်သောအကျင့်ကရှင်းပြသည်:
ဒေါင်းလုပ် Zenmate Code ကို နှင့်သင့်အသားတင် browser ကိုများအတွက် Zen အိမ်ထောင်ဖက်ထိပ်တန်းမှုနှုန်းကို set up.
အဖြစ်မကြာမီပြီးစီးအဖြစ်, စီမံကိန်းအိုင်ကွန်ပိုက်ကွန်ကို browser ရဲ့ထိပ်လျော်သောထောင့်အတွင်းမှပြပေးလိမ့်မယ်, add-on ရဲ့ဖြစ်ပွားနေသောစစ်ဆင်ရေးကိုညွှန်း.
ဆက်ဆံရေးလုံ့လရှိသူဖြစ်ပါတယ်နေတုန်း, အဝင်နဲ့အထွက်အသွားအလာနှင့် browsing အတွက် pastime ဒီအော်တိုဖြစ်ပါတယ်စကားဝှက်နဲ့ encrypt နှင့်စောင့်နေသည်.
Zenmate ဒေါင်းလုပ် ၎င်း၏ server ကိုအရပျကိုစက်ရုပ်က၎င်း၏ပထဝီကိုသြဒီနိတ်စဉ်းစားရှေးခယျြ. အသုံးပြုသူထိုနည်းတူကိုယ်တိုင်ပြသထားသောနေရာများတွင်မဆိုမှမဆိုအချိန်မှာဒီပြောင်းဖို့ဖို့ရှေးခယျြမှုပေးထား.
အပြည့်အဝ Zenmate ပရီမီယံ တစ်ဦး Zenmate ၏လွတ်လပ်သောမော်ဒယ်တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်စျေးဝယ်၏အကူအညီနှင့်အတူလက်ခံရရှိနိုင်ပါတယ်. အဆိုပါအဆင့်မြှင့်တင်သုံးရရှိနိုင် applications များမှတဆင့်ဝယ်ယူစေခြင်းငှါ:
မှာထိပ်တန်းမှုနှုန်း 8.99 ယူရိုတစ်လ-to-တစ်လ
မှာထိပ်တန်းအတန်းအစား 7.99 များအတွက်လစဉ်ယူရို6လများ (20% ဖြတ်-စျေးနှုန်းစာချုပ်)
မှာထိပ်တန်းအတန်းအစား 6.99 ယူရိုတစ်လ-to-လ 365 ရက်ပေါင်း (30% ဖြတ်-စျေးနှုန်းစာချုပ်)
အဆိုပါအပ်လုဒ်ကိုတဦးတည်းရဲ့လွှတ်ပေးရန်အစိတ်အပိုင်း၏တစ်ချိန်ချိန်, ပရီမီယံယခုဝယ်ယူမှုများအတွက်ရရှိနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေတိုးတက်ကောင်းမွန်. အကျိုးဆက်, အသုံးပြုသူကဒီထူးခြားတဲ့အဆင့်၏အဆုံးသည်အထိန့်အသတ်သတင်းအချက်အလက် site ကိုဧည့်သည်များရှိပါတယ်.
ဆယ်လူလာ gadgets များအတွက် VPN ကို app ကိုဧည့်သည်များစာရင်းဇယား 500mb ၏ကန့်သတ်မယ့် site ကိုသလောက်အခမဲ့. ယင်း၏န့်အသတ် site ကိုဧည့်သည်များမှတ်တမ်းများမှတိုးတက်စေရန်, အသုံးပြုသူများသည်ကိုလည်းထံမှကောက်နေမျက်နှာသာနိုင်ပါတယ်2လျှောက်လွှာများ:
မှာအဆမဲ့2အမေရိကန်ဒေါ်လာလစဉ်
မှာ Unlimited 20 အမေရိကန်ဒေါ်လာနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း
အဘို့အ Zenmate လက်ရှိအီးမေးလ်ကတဆင့်ရောက်ရှိနိုင်ဖောက်သည်ထောက်ခံမှုရှိပါတယ်. အဆိုပါအကူအညီပေးရေးအုပ်စုတစ်စုနီးပါးအဆက်မပြတ်တစ်ဦးစုံစမ်းမှုသို့မဟုတ်စိန်ခေါ်မှုမှ reply ပါလိမ့်မယ် 24 နာရီသို့မဟုတ်အများကြီးလျော့နည်း.Zenmate ပရီမီယံ Code ကို Crack ယခုကို download လုပ်ပါ.
ချောမွေ့ setup ကိုနှင့်ကို set up ချဉ်းကပ်မှု
အောက်ပါ tool ကိုအတွက်အဘို့အထွက်ပေါ်လာဖို့အရာဖြစ်ကြ၏:
ဒါဟာလက်ရှိအရိုးရှင်းဆုံးငါး server ကိုအရပ်တို့ကိုအိမ်ရှင်အဖြစ်.
ယင်းကိုစတင်-Up အလားအလာပုံရသည်ဟူသောအချက်ကိုနေသော်လည်း, ဒါကြောင့်ကမ္ဘာအနှံ့အမျိုးမျိုးသောဖောက်သည်များ၏ဆန္ဒကိုမှဖြည့်တင်းဖို့ သာ. ကြီးမြတ်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုနှင့်အခွက်ပေးရမညျ.
အဆိုပါဝန်ဆောင်မှုကိုသာဝေး၌တည်ရဲ့အင်တာနက် browser မှာသေချာလှုပ်ရှားမှုများမှသတ်နေသည်. ဆက်သွယ်မှုကြည့်ဖို့အီးမေးလ်များနှင့်သက်တူရွယ်တူသို့ရာတွင်၎င်း၏ကာကွယ်စောင့်ရှောက်လွှမ်းခြုံ၏ပြင်ပများမှာ.
ရန်လိုအပ်ချက် Zenmate Download တချို့ IP ကိုပေါက်ကြား plug မှဒါ့အပြင်မတူညီတဲ့ plugins ကို install မကြာမီဖြစ်ပါတယ်. ဤရွေ့ကားယိုစိမ့်ကို flash နဲ့ web RTS ထံမှများသောအားဖြင့်ရှိပါတယ်. ဒီအကာကွယ်စောင့်ရှောက်နေတဲ့အဆင့်မြင့်နှင့်အတူစတင်မည်ချင်တဲ့သူတွေကိုအသုံးပြုသူများအများအတွက်အရေးပါအခွအေနေပါလိမ့်မယ်.
သော်လည်း Zenmate ပရီမီယံကို Hack VPN ကိုလေယာဉ်တင်သင်္ဘောများအတွက်ကြံ့ခိုင်အခြေစိုက်စခန်းအဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားသို့ခေါ်ဆောင်သွားမည်အကြောင်း,, လက်ရှိမပြည့်စုံပါကရဲ့မိုင်. add-on အလွန်အားကောင်းတဲ့ရဲ့အသားတင် browser များနှင့်ဆယ်လူလာများအတွက်ယုံကြည်စိတ်ချရသော VPN ကိုများအတွက်လုံခြုံရေး provider ကတင်ဆက်. ထိုကဲ့သို့သော IP ကိုပေါက်ကြားခြင်းနှင့် server ကိုနေရာများကိုရရှိနိုင်မှုအဖြစ်ချက်ချင်းဖြေရှင်းခံရဖို့လိုကွောငျးအနည်းငယ်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများရှိပါသည်. အဆိုပါတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်မည်သို့ပင်ဆိုစေဝေးက၎င်း၏ပြည့်စုံပုံသဏ္ဍာန်ကနေမိုင်ရဲ့စဉ်းစားနေတဲ့သံသယမရှိဘဲခက်ခဲတဲ့ရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါသည်.
← အားလုံး Ip Crack Hide – အခမဲ့ဒေါင်းလုပ်အပြည့်အဝ Activation Key ကို + serial Keygen Adobe က CC ကို Patcher – မိုဃ်းတိမ်ကို Patch 2017 ရိုက်သံ + Keygen →